(1)32 Bits နှင့် 64 Bits ဘယ်လိုခွဲမလဲ | (2) 32 Bits နှင့် 64 Bits ကွာခြားချက်များ ~ ITmanHOME
12:43 window7, နည်းပညာ No comments
(1)32 Bits နှင့် 64 Bits ဘယ်လိုခွဲမလဲ | (2) 32 Bits နှင့် 64 Bits ကွာခြားချက်များ
ကျွန်တော်တို့ Windows7အသုံးပြုသူတွေအတွက် မိမိတို့ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows က 32 Bits
လား 64 Bits လားဆိုတာကိုခွဲခြားလို့ရမဲ့နည်းလမ်းလေးကိုပြောပြ ပေးချင်ပါတယ်.. သိပြီးသားသူတွေအတွက်
တော့ မထူးဆန်းပေမယ့် မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ သိထားသင့်တာအမှန်ပါပဲ..မိမိတို့အသုံးပြုနေ
ကွန်ပျူတာ 32 Bits လား 64 Bits လား သိချင်တယ် ဆိုရင် အရင်ဆုံး My Computer ကို Right Click
ထောက်လိုက်ပါ..ပြီးရင် System ထဲက System Type မှာကြည့်လိုက်ပါ.. 32 Bits Opearting System
လို့ပြထားရင်မိမိတို့အသုံးပြု နေတဲ့ Windows က 32 Bits ပါ.. 64 Bits Opearting System လို့ပြနေရင်
မိမိတို့အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာက 64 Bits ပါ..။ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Windows က 32Bits
လား 64 Bitsလားအလွယ်တကူကြည့်တက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်..အောက်မှာပုံလေးနဲ့လဲပြပေးထားပါတယ်..
My computer >> Right click >> Properties >> System >> Rating >> Window Experences Index ကနေ>>View and printed detail … ကိုနိုပ်လိုက်ရင် အဲ့မှာ ဆက်ကြည့်ကြည့်ပါ.. အောက်ကပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ...
ဒီတခုကတော့ ဆောဝဲနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ခွဲခြားနည်းပါ ဒါကတော့ အကြမ်းဖျင်း မဟုတ်တော့ဘူး ဒီဆော့ဝဲနဲ့ဆိုရင် CPU. Graphit .RAM တွေပါ မက caches တွေကိုပါ ကြည့်လို့ ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီနည်းမှာတော့ ကိုယ့်စက်မှာ ရမ်းနေတဲ့ OS က အထီးလား အစ်မလား ခွဲခြားတက်အောင်လုပ်တာ အဆင့်မရူပ်ပါဘူး. အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ရင် သဘောပေါက်မှာပါ။ဆော့ဝဲနာမည်က CPU_Z ပါ သူက Freeware ဖြစ်သလို System application ပါ... ဒီနေရာမှာ http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.htmlဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အကုန်လုံးကိုကြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ 64 bit ကို လက်ခံ အသုံးပြုနိုင်လားဆိုတာကို သိချင်တဲ့ အတွက် အောက်မှာ ပုံနဲ့ အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားပါတယ်။ EM64T ဆိုတာကို တွေပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို 64 ကို လက်ခံပါတယ်...